मोटोपन को समस्या बाट चिन्तित हुनुहुन्छ? मोटोपन घटाउन चाहानुहुन्छ ? यी ६ खानेकुरा खानुहोस् !! | Naya News Nepal
Home स्वास्थ्य/जीवनशैली मोटोपन को समस्या बाट चिन्तित हुनुहुन्छ? मोटोपन घटाउन चाहानुहुन्छ ? यी ६...
मोटोपन को समस्या बाट चिन्तित हुनुहुन्छ? मोटोपन घटाउन चाहानुहुन्छ ? यी ६ खानेकुरा खानुहोस् !!
३० जेष्ठ २०७८, आईतवार १४:५५
काठमाण्डौ – जेष्ठ ३०,
शरीरको तौल बढ्दा जो कोहीलाई चिन्ता हुनु स्वभाविक हो । अझ महिलाहरुलाई बढी चिन्तित बनाउने गर्छ ।
महिलाहरुको पेटमा लाग्ने बोसोले उनीहरुलाई बढी तनाव दिने गर्छ । ब्यायाम र योग गर्न पनि नचाहने र शरीरमा बोसोको मात्रा बढ्यो भनेर चिन्तित हुने ब्यक्तिहरुले आफ्नो खानपिन शैलीलाई केही सुधार गरेर सन्तुलित भोजन लिएरपनि शरीरको तौल घटाउन सक्छन् ।
अण्डा प्रोटीनको उत्तम स्रोत हो । यसले शरीरको मेटाबोलिजम सुधार गर्दछ र पेटको बोसो कमगर्न मद्धत पुरÞ्याउंछ । अण्डाले ऊर्जा दिन्छ, जसले अत्यधिक खाना सेवनलाई रोक्छ । तौल घटाउन अण्डाको सेतो भाग मात्र खानु पर्छ ।
ग्रिन टी :
Previous articleनेपालभर सक्रिय बन्दै मनसुन, यो वर्ष औसत भन्दा बढी पानि पर्ने- ‘सर्तक रहन आग्रह’
Next articleकाठमान्डौ उपत्यका मा निषेधाज्ञा थपियो, हार्डवेयर र पुस्तक पसल भने खोल्न पाउने